Mobilada Isbaanishka ugu fiican | Androidsis
Waa wax caadi ku ah Isbaanishka, markaan tixgalino ikhtiyaarka ah inaan cusbooneysiino taleefankeena gacanta ee hore mid cusub, noocyada ajaanibta ah sida Huawei, Samsung, Apple, Lenovo, Motorola, Xiaomi, LG iyo kuwo aad u dheer iwm. . Tani, qayb ahaan, waa macquul, waana taas Awoodda suuqgeyntu waa wax aan lasoo koobi karin. Dhammaan noocyadan ma ahan oo keliya inay ku martiqaadaan qaddar aad u tiro badan suuqgeynta iyo xayeysiinta, laakiin sidoo kale waxay fiiro gaar ah ka helaan warbaahinta, kuwa takhasuska leh iyo kuwa guud. Iyo waxaas oo dhan iyada oo aan la tirin "guutooyinka taageerayaasha" ee maalin walba wax ku qora boggaga internetka, bogagga internetka iyo shabakadaha bulshada, sidaas awgeedna wax badan ku kordhinaya sidii ay caan u ahaan lahaayeen magacyadan.
Laakiin runtu waxay tahay Spain gudaheeda waxaan sidoo kale leenahay soo saarayaasha taleefannada casriga ah, iyo maya, uma jeedo cirifka. Waa run oo maheystaan ​​awood warbaahineed oo badan oo magacyada ah oo aan horey u soo sheegnay, sidoo kale waa run in aysan kicin xiisaha warbaahinta sida kuwan oo kale, hase yeeshe, ma hayaan wax ay ku xaasidaan. Waxay bixiyaan taleefannada gacanta ee Isbaanishka oo tayo wanaagsan leh, qiimahooduna wanaagsan yahay, tan ugu muhiimsanna, waxay ka dhigayaan kuwa isticmaala inay faraxsan yihiin. Waxaas oo dhan, maanta Androidsis waxaan kuugu keenaynaa xulasho qaar ka mid ah moobiillada ugu fiican ee isbaanishka xilligan.
1 Telefoonka Tamarta Pro 3
4 Magaalada MyWigo 3
5 Mobiles-ka Isbaanishka?
Telefoonka Tamarta Pro 3
Waxaan bilaabeynaa xulkeena kuwa ugu fiican Mobiles-ka Isbaanishka oo leh mid ka mid ah noocyada aan ugu jeclahay, oo keliya kuma xirna taleefannada casriga ah, laakiin sidoo kale waxyaabo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin sameecadaha dhegaha, akhristayaasha e-buugaagta, ku hadlayaasha, kiniiniyada iyo waxyaabo kale oo badan. Waxaan ula jeedaa Nidaamka Tamarta, iyo si gaar ahba, oo lagu tilmaami karo inuu yahay calankeeda, the Telefoonka Tamarta Pro 3, casriga ah - phablet oo bixiya a 5,5 inji IPS shaashad HD buuxa ah (1920 x 1080 pixels) oo leh difaac Dragontrail iyo shaashad ka hortagga farta. Ka samaysan bir, Tamarta Telefoonka Pro 3 guri oo ku yaal a Sideed-xuddun ARM Cortex A53 processors at 1.5 GHz oo ay la socdaan a Mali T860 GPU, 3 GB RAM xasuusta y 32 GB oo kaydinta gudaha lagu ballaarin karo iyada oo loo marayo kaararka microSD-HC / XC illaa 256 GB dheeraad ah.
Qeybta fiidiyowga iyo sawirka, waxay u taagan tahay iyada dejinta laba kamaradood oo leh muraayad 13 MP oo leh wajiga autofocus (PDAF) iyo mid kale oo 5 MP ah oo leh autofocus, labalaab midab leh, dib-u-fiirsasho, qaab sawir. Iyo hore, a 5 MP kamaradda hore.
Waxyaabaha kale ee astaamaheeda ugu caansan waa inay la timaado Android 7.0 Nougat sida nidaamka qalliinka iyo sidoo kale wuxuu leeyahay a Batariga 3.000 Mah oo leh nidaam lacag-bixin deg deg ah (1 saac gudahood waxaad ku gaari kartaa ilaa 65% lacag), 3.5mm jack headphone, support Dual SIM, Bluetooth 4.1, akhristaha faraha, iyo dareemayaal badan, shaqooyin iyo astaamo dheeri ah oo u dejiya inay tahay mid ka mid ah mobilada Isbaanishka ugu fiican xilligan.
Waxaan hadda u boodboodi doonaa mid kale oo ka mid ah kuwa ugu caansan uguna guuleysta soo saarayaasha mobilada Isbaanishka, laakiin si gaar ah waxaan u tixraaceynaa xagga sare ee kala duwan, the BQ Aquaris X Pro, Taleefan casri ah oo waxqabad sare leh «Loogu talagalay Spain», iyada oo shirkadda lafteedu ku dhawaaqday xayeysiinteeda
BQ Aquaris X Pro wuxuu ku bixiyaa qaab quruxsan oo taxaddar leh a 5,2 inji IPS shaashad HD buuxa ah 2.5D leh xalka 1080 x 1920, daaweynta anti-faraha iyo Teknolojiyada Quantum + taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan aragno midabbo muuqda oo firfircoon.
Gudaha gudihiisa waxaa ku yaal a Processor Snapdragon 626 Qualcomm oo leh sideed buundo iyo xawaare saacad ah oo ah 2,2 GHz oo ay weheliso GPU Adreno 506, 3 ama 4 GB oo RAM ah (waxay kuxirantahay nooca la doortay), iyo 32GB, 64GB, ama 128GB keydinta gudaha ah oo aan ku ballaarin karno kaarka microSD illaa 256 GB.
Nidaam hawlgal ahaan, BQ Aquaris X Pro ayaa la yimaada Android 7.1.1 Nougat isku xirnaanta Bluetooth 4.2, NFC, laba makarafoon, akhristaha faraha, GPS, 4G, Dual SIM, Nooca USB-C iyo waxyaabo kaloo badan. Laakiin shaki la'aan, dhibicdeeda xoogga leh waxay ku jirtaa qaybta fiidiyowga iyo sawir qaadista.
La kamaradda ugu weyn Waxay leedahay Samsung S5K2L7SX 12 MP Dual Pixel sensor oo leh ƒ / 1.8 aperture, iyo 1.4 µm pixels awood u leh inay soo qabtaan ilaa 33% iftiin badan, taas oo ka dhigaysa ku habboon kuwa jecel sawirada habeenkii ama xaalado iftiin hooseeya. Waxay sidoo kale bixisaa Dual Tone Flash, wajiga ogaanshaha autofocus, xasiliyaha fiidiyowga, xakamaynta gacanta ee xuduudaha (waqtiga soo-gaadhista, diiradda iyo ISO), toogashada qaabka RAW iyo waxyaabo kale oo badan.
La kamarad hore wuxuu isku xiraa 5 MP Samsung S4K8H8YX sensor oo leh furitaanka ƒ / 2.0, 1.12 µm / pixel
tooshka hore iyo qaabka quruxda tooska ah.
Iyada oo intaas oo dhan, iyo shaki la'aan, waxaan nahay, ugu yaraan, ka hor mid ka mid ah moobiillada Isbaanishka ugu fiican ee aan ka heli karno suuqa.
Waxaan qoorta u taaganahay in saxiixa Weimei uu u muuqdo mid aad u yar oo kuwa aqrinaya ah. Waxay u badan tahay xitaa, haddii aad maqashay, waxaad u maleyneysaa inay tahay nooc shiineys ah oo ay ugu wacan tahay magaceeda si kastaba ha ahaatee, wax runta ka fog ma jiraan. Weimei waa bilowga Madrid, laga yaabee inuu yahay kii ugu dambeeyay ee magacyada mobilada Isbaanishka ah, laakiin ujeedadeedu waa inay bixiso adeegyo tayo sare leh oo qiimo jaban. Waana sida tan Weimei WePlus 2, shirkad caan ah oo hadda ka mid ah shirkadeeda ayaa lagu qeexay "talaabada xigta ee horay loogu sii qaadayo taleefannada casriga ah."
Weimei WePlus 2 cusub ayaa leh a 5,5 inji IPS shaashad HD buuxa ah 1920 x 1024 pixels iyo nidaamka qalliinka ee weOS oo ku saleysan Android 6.0 Marsmallow oo ay ku shaqeyso a Octa-core ARM Cortex A53 processor 1,8 GHz oo ay weheliso 4 GB RAM iyo 64 GB oo keyd ah Gudaha aad ku ballaarin karto adoo isticmaalaya kaarka SD-ga yar illaa 128GB.
Qeybta fiidiyowga iyo sawir qaadista, Weimei WePlus 2 waxay leedahay a kamaradda ugu weyn ee 13 MP leh habayn habeen, qaab qurux iyo wixii la mid ah 14 qaababka sawir qaadista, iyo a 8 MP kamaradda hore iyadoo wajiga lagu ogaanayo.
Waxaas oo dhan waxaa lagu dhammaystiray a 3130 mAh baytariga oo leh isku xiraha Nooca C-ka ee USB iyo "Smart Battery Optimizer" iyo "Habka Baaxadda leh", oo lagu daray Bluetooth 4.0, Dual SIM, 3.5mm jack isku xiraha dhagaha, GPS iyo inbadan.
Magaalada MyWigo 3
Sharad kale oo xiiso leh ayaa ah tan shirkadda MyWigo, oo ka tirsan shirkadda caalamiga ah ee fadhigeedu yahay Valencia Cirkuit Planet, taas oo, inkasta oo ay wax yar noogu muuqan karto, runtu waxay tahay inay joogaan ku dhowaad boqol waddan. Mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu wanaagsan ayaa ah tan Magaalada MyWigo 3, terminal leh 5,5 inji IPS HD shaashad ah iyo nidaamka hawlgalka Android 6 Marsmallow Waxaa ku shaqeeysa 6737GHZ afar geesle ah oo ah processor MediaTek MT1,33 oo ay weheliso 3 GB ee RAM, 32 GB oo keyd ahama la ballaarin karo gudaha illaa 64 GB iyada oo loo marayo kaarka microSD, deeqsi ah 3650 mAh baytariga, akhristaha faraha, 4G ...
Marka ay timaado kaamirooyinka, waxay bixisaa a 13 MP kamarad weyn ku qalabeysan yahay Samsung S5K3L8 sensor, Dual Led Flash iyo wajiga ogaanshaha autofocus (PDAF), iyo a 8 MP kamaradda hore ku dhaji flash si aad sawir fiican u qaadatid.
MyWigo City 3 maahan taleefoonka ugu fiican liistadaan, si kastaba ha noqotee waxay ku siisaa waxyaabo tayo wanaagsan leh qiimo macquul ah.
In badan oo idinka mid ah waxay u badan tahay inaad ka fikirteen dhowr jeer intii aad akhrisay qoraalkan, in kastoo aan ka hadlayno "mobilada Isbaanishka", Kuwani ma aha qalab lagu soo saaray boqolkiiba boqol xuduudahayaga gudahooda. Haa, waad saxantahay Qeybaha kala duwan ee taleefanada (jibbaarada, modullada kaamerada, shaashadda, makarafoonada, baytariyada iyo kuwa kale) waxaa laga soosaaray soo saarayaasha qeybta saddexaad. Tusaalaha ugu cadcad waxaa laga helaa processor-yada ay soo saari karaan Qualcomm, MediaTek, iyo wixii la mid ah. Isla sidaas ayaa ku dhacda muraayadaha kamaradaha iyo walxo kale. Intaa waxaa sii dheer, habka ugu dambeeya ee isku imaatinka waxaa sidoo kale badanaa sameeya shirkad kale oo dibedda ah, had iyo jeer Shiinaha ama waddan bariga ah. Waxaas oo dhami waa "caadi", macno ahaan inay tahay wax caam ah oo ka yimaada dhammaan shirkadaha, laga soo bilaabo kuwa ugu waaweyn sida Samsung ama Apple, kuwa aad u tiro yar oo weimei ah. Mana joojinayno inaan dhahno Apple waa Mareykan, ama Samsung iyo LG maahan shirkadaha South Korea.
Sababtaas awgeed, shirkadaha qaar waxay sameeyaan dadaal ay ku ogaanayaan in mobiladoodu ay yihiin Isbaanish iyagoo u maraya farriimaha sida «Waxaa loogu talagalay Spain» oo ay ku jiraan saxiixa BQ. Taasi miyaanay u muuqan wax badan sida farriin gaar ah oo shirkad kale oo leh astaamo miro ay ku jiraan alaabooyinkooda? Hagaag haa, kuwaana sidoo kale waxaa lagu sameeyaa Shiinaha, in kasta oo qiimahoodu shan jeer ka sarreeyo.
Marka la soo koobo, liiska qalabka aan aragnay ayaa ka mid ah Mobiles-ka Isbaanishka maxaa yeelay waxaa loogu talagalay Spain iyo sababta oo ah shirkadaha ay ku shaqeeyaan Spain, Iyadoo xisaabaad u siineysa Gobolka Isbaanishka, iyadoo aan loo eegin haddii qayb gaar ah ay soo saartay mid ama shirkad kale dal ama dal kale.
Iyo illaa iyo hadda xulkeenna moobiillada Isbaanishka ugu fiican. Xusuusnow in liistadani aysan ahayn darajo oo laga yaabo inaan ka tagnay terminaal dhuumaha. Hadday sidaas tahay, haddii aad haysato taleefanka gacanta ee Isbaanishka oo waxqabadkiisa aad ku faraxsan tahay oo aad rabto in adduunku ogaado, noo sheeg faallooyinka oo naga caawi inaan ballaarinno liiskan oo, ka dib, aan waxba ka ahayn soo-jeedin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Mobilada Isbaanishka ugu fiican
Dib-u-eeg MAZE Alpha 4G the 6 "iyadoon loox lahayn oo kaa yaabin doona qiimaha lacagta
ZOJI Z8, waa gaari dhammaan dhul ah oo ka yar 150 euro